Lifestyle – ပဒသော
ဖုန်းဆော့နေတဲ့ ကလေးတွေဒီပုံကိုကြည့်ထားကြဗျာ…(ဘယ်အရာမှ အလွန်အကျွန်မကောင်းဘူးဗျာ…)
ဖုန်းဆော့တဲ့ ကလေးတွေ ဒီပုံကြည့်ထားကြဗျာ ဖုန်းဆော့လို့ ဖြစ်သွားတာပါ အာလုံးသိအောင် မျှဝေပေးကြပါ ဖုန်း ဆော့ တဲ့ က လေး တွေ ဒီ ပုံ ကြည့်ထားကြ ဗျ ဖုန်း ဆော့ လို့ ဖြစ် သွား တာ ပါ အာ လုံး သိ အောင်
မြန်မာမိန်းကလေးတိုင်းဖတ်ဖို့…(နှစ်ခါပြန်မရတဲ့ အပျိုစင်ဘ၀ကို တန်ဖိုးထားကြပါ..)
“နှစ်ခါပြန်မရတဲ့ အပျိုစင်ဘဝလေးကို တန်ဖိုးထားကြပါ…” တဏှာရမက်နဲ့ ကြည့်ရင်မင်း ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ကလေးမွေးလို့ ရတာ မှန်တယ် မေတ္တာစစ်စစ်နဲ့ ကြည့်ရင်မင်း အရွယ် မရောက်သေးဘူး..။ အချစ် စစ်စစ်နဲ့သာ ကြည့်အိမ်ထောင်မှုတာဝန် ဆိုတာကိုမင်း ဘာမှ မသိသေးဘူး..။ ဟို …….. ကောင်မလေး ။ မင်းကို ချစ်လို့ ပြောတာနော်ရိုင်းသွားရင် ခွင့်လွှတ် ၊ကိုယ်က
ဖုန်းနဲ့ နားကျပ်အမြဲနားထောင်တဲ့ သင့်သူငယ်ချင်းကို မန်းရှင်းခေါ်ပြီး သတိပေးလိုက်ပါအုံးနော်….
ဖုန်းနဲ့ နားကျပ်တပ်သုံးတာများပြီး နားစီအိမ်ကွဲ ဦးနှောက်တစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားပြီး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ကောင်မလေး အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ဆုံးပါးသွားခဲ့ရပါပြီ။ နားစီအိမ်ကွဲ ဦးနှောက်တစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားပြီး ကုသဖို့ လက်လျှော့လိုက်ရပါတယ်။ အရင်ကကြားဘဲ ကြားဘူးတာ အခုတော့ ကိုယ့်အမျိုးထဲက ဖြစ်မှဘဲ တုန်လှုပ်မိတော့တယ်ဗျာ။ အားလုံးဘဲ သတိရှိကြပါ။ ဖုန်းနဲ့ နားကျပ်တပ် အားသွင်းပြီး သုံးတာ လက်တွေ့ပါပဲ။ ကောင်းရာမွန်ရာ
ကိုယ်ချစ်လို့ယူထားတာပဲ ဒီလောက်အထိလုပ်ဖို့တော့ မလိုပါဘူးဗျာ…
ဒီတစ်သက်ယောကျားမယူဘူး😑 မိန်းမယူတာရိုက်ဖို့ နှပ်စက်ဖို့ယူတာလာ မေးချင်တယ် ____? ယောကျားရွေးမမှားစေနဲ့ ပိုက်ဆံချမ်းသာတယ်ဆိုပီ မယူမိစေနဲ့ ဆင်းရဲတယ်ဆိုပီခြံမထားပါနဲ့မလေးစားမဖြင့်ပါနဲ့ ခုခေတ်တစ်ချို့မိန်းခေးတွေက ချမ်းသာဖို့သာအရေးတကြီး ထားတတ်ကြတယ် ကိုယ့်အချစ်ကိုမရှာပါနဲ သူ့အချစ်ကိုသာရှာပါ လင်မယားရန်ဖြင့်ရာမှ အက်စစ်နဲ့ပတ်ဖြင့်ဖွား Unicode ဒီတဈသကျယောကြားမယူဘူး မိနျးမယူတာရိုကျဖို့ နှပျစကျဖို့ယူတာလာ မေးခငျြတယျ ____? ယောကြားရှေးမမှားစနေဲ့ ပိုကျဆံခမျြးသာတယျဆိုပီ မယူမိစနေဲ့ ဆငျးရဲတယျဆိုပီခွံမထားပါနဲ့မလေးစားမဖွငျ့ပါနဲ့ ခုခတျေတဈခြို့မိနျးခေးတှကေ ခမျြးသာဖို့သာအရေးတကွီး
အစိုးရရဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးက ဒီလိုလူမျိုးတွေကို ဦးစားပေးပြီး ပေးသင့်တာလေဗျာ…(သက်ဆိုင်သူတွေသိအောင် မျှဝေပေးပါအုံးနော်…)
ဝက်လက်မြို့နယ် ညောင်ပင်ကြီးတောရွာမှ အဖွား ဒေါ်ရွှေပုံတဲ့ဗျာ။ နာမည်ကတော့ သိပ်လှဗျာ။ အသက်က ( ၈၀) ကျော်ပြီတဲ့။ သားတစ်ယောက် ရှိသတဲ့။ ရှိတဲ့သားကလဲ စိတ်သိပ်မကောင်းဘူးလို့အဖွားဒေါ်ရွှေပုံကပြောပါရဲ့။ အခုတော့ အသက်အရွယ်ကြီးသည်အထိ ဆူးပုတ်ရွက်ရောင်းနေ ရပါသည်။ အစိုးရထောက်ပံ့ကြေးကလဲဘာမှ မရဘူးလို့ပြောတယ်။ ဝက်လက်မြို့နယ် ညောင်ပင်ကြီးတောရွာမှ အဖွား ဒေါ်ရွှေပုံတဲ့ဗျာ။ နာမည်ကတော့ သိပ်လှဗျာ။
အောင်စာရင်း အစောဆုံးသိချင်ရင် ခုံနံပါတ်ပေးထားပြီးရှယ်သွားလိုက်နော်…
စာမေးပွဲအောင် ဂါထာတော် “ဒေဝါနံ နန္ဒနော ဒေဝေါ၊ ဒေဝ ဒေဝေန နန္ဒိနော။ ဝေဒ ဒိနေန ဝေဒေန၊ ဝေဒိ ဝေဒေန ဝေဒိနော ” “ဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ဖွင့် ဒဝနကာရ ဂါထာ” ဟူ၍လည်းခေါ်သည်။ ယင်းဂါထာကို စာမေးပွဲ မဖြေခင် ရတနာ သုံးပါး မိဘ ဆရာသမားများကို အာရုံပြု၍ (၇)ခေါက်
ပြည်သူတွေအစားတစ်ယောက်ထဲရင်ကော့ခံနေရတဲ့ အမေစုရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် အာဆီယံမှာကျားတစ်ကောင်အဖြစ် ပြန်လည်နိုးထလာတော့မည့် ရွှေမြန်မာ အမေအသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ ဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ
ကမ္ဘာမှာ စီးပွားရေးတွေ ပြန်စတယ်။ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်ကြတယ်။ COVID ကို နိုင်လိုက်ပီဆိုပီး ရဲဝံ့စွန့်စားလိုက်ကြတယ်။ Mask တွေ မတပ်ကြတော့ဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ COVID က နောက်တကြိမ် ထတွယ်ပါတယ်။ ဂျပန်မှာ မြို့တွေ ပြန်ပိတ်လိုက်ရပီ။ Lock Down ပေါ့။ ၃လ ကျော် ပိုးကူးတဲ့သူ တယောက်မှ မတွေ့ခဲ့တဲ့
ရသစုံ | August 6, 2020
👉ညီမလေး တွေသိပ်ချစ်တဲ့👈 🏋️ကိုကြီးတွေ ဖြစ်စေဖို့🏋️ ခုခေတ် လူငယ်တွေကြားထဲမှာ အရေးပေါ် ကိုယ်ဝန်တားဆေး ဆိုတာ မသိသူ မရှိသလောက် ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒါပေမဲ့လည်း မှန်မှန်ကန်ကန် သိနေကြတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ တကယ်တော့ အဲဒီဆေးက မမျှော်လင့်ဘဲ အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံမိလိုက်တဲ့ နောက်မှာ ကိုယ်ဝန် မရအောင် သောက်ရတဲ့ဆေး။ မြန်မာကားစကားနဲ့ ပြောရရင် ပန်းအိုးကွဲပြီးရင်
ကျွန်တော်တို့ အမေ့ကို ချစ်တယ်ဆိုတာထက် သူကပိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်လဲ့လဲ့မော်ကို မဲ့ပြရုံမက လို့ နောက်က ကန်ချခဲ့ရင်တောင် ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်မလုပ်လို့ အနေအထိုင်မတက်လို့ ကန်ချခံရတာလို့ပဲ မြင်မိမှာ။ ဒီခလေးမလေး ကိုတော့ အပြစ်မြင်မိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာ ကြောင့်လည်းဆိုတော့ အမေ့ အပေါ်ထားတဲ့ ဒီခလေးမရဲ့မေတ္တာစေတနာက ကျုပ်တို့ထ က်သာလို့ပဲ။ ချယ်ရီထက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးသား ခဲ့ကြတဲ့ စာလေးကိုလည်းမျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ
သီချင်းတွေမှာ အဆိပ်တွေပါတယ်..ဒါကြောင့် ပေါက်ကွဲနေတာပါ….
ကျနော်တို့ ပေါက်ကွဲနေတာကစည်းလုံးရအောင်လို့ရိုက်ထားတာကို မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့လည်း မြန်မာပြည်တပြည်လုံး တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမတွေနဲ့ အတူတူငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေချင်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူပြတာမှာ အဆိပ်တွေပါနေတယ်။ နိုင်ငံရေးအဆိပ်ဗျ။ စီမံကိန်းကို ပင်နီဝတ်လူကြီးက ဘာလို့တားမြစ်ရတယ်ဆိုတာကို မပြောပြသွားဘဲ အရင်လူတွေလုပ်ထားလို့ တမင်ဖျက်တယ် ပင်နီဝတ်တွေဖျက်လို့ ပြည်သူတွေစားဝတ်နေရေး ခက်ခဲရတယ်လို့ အဆိပ်ခပ်တယ်။ နောက်တချက်က ဒေါ်စုကို လုပ်ကြံစေချင်လို့ လမ်းပြလုပ်တာလား? ဒေါ်စုလုပ်ကြံခံရရင် စစ်တပ်ကပဲ ကယ်ရမှာ။
၀င်းနဲ့ဇော် အတွက် သတင်းကောင်းကြီး လာပါပြီ